ग्रामीण विकास लघुवित्तको साधारणसभा सकियो, सेयरधनीको हात रित्तै !
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा माघ १२ गते शनिवार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले संचालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा संस्थाले आ.व. २०७४/७५ को आषाढ मसान्तसम्म देशका ५७ जिल्लामा १८८ वटा इलाका/शाखा कार्यालय मार्फत लघुकर्जा तथा...
उन्नति माइक्रोफाइनान्स राष्ट्रियस्तरको बन्ने, ४०.५% बोनससँगै २०% हकप्रदको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । उन्नति माइक्रोफाइनान्सले बोनस र हकप्रद वितरणको अजेण्डासहित आगामी माघ २६ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले रुपन्देहीको भैरहवास्थित होटल पौवामा आह्वान गरेको सभामा गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफाबाट ४०.५० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्म कायम ५ करोड ५०...
एसबीआई बैंकद्वारा १५.७९% को लाभांश पारित
काठमाण्डौ । नेपाल एसबीआई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापूँजीमा १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको सोमबार काठमाण्डौस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित २५ औं वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको अजेण्डा पारित गरेको हो...
सिटिजन्स बैंकको साधारणसभाबाट लाभांश पारित
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको वार्षिक साधारणसभाले आफ्ना सेयरधनीलाई ३.६ प्रतिशत बोनस सेयर र १.६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोमबार काठमाण्डौको लैनचौर ब्यांक्वेटमा सम्पन्न १२ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई रु २९,१४,४५,७७३(करीब३.६ प्रतिशत) बोनस शेयर तथा रु...
सनराइज बैंकद्वारा ११.५०% नगद लाभांश पारित, अध्यक्षमा पुनः मोतीलाल दुगड
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमीटेडको साधारणसभाले ११.५० प्रतिशतको दरले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न २९ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीलाई ११.५० प्रतिशतको दरले हुन आउने ९३ करोड ७५ लाख ४३ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । सो...
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्तापूँजी १२.५८ अर्ब पुग्यो, सेयरधनीकोष निजी बैंकमध्येकै उच्च
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारणसभाले २०७४/७५ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट २०७५ असार मसान्तसम्ममा कायम शेयर पूँजीको १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबार सम्पन्न बैंकको ३२ औं साधारणसभाबाट पारित बोनस सेयरसँगै चुक्तापूँजी रु. १२ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, बैंकको जगेडा तथा...
जनता बैंकको एजीएम: नगद लाभांश पारित, ब्रोकरेज सेवा थाल्ने
काठमाण्डौ । जनता बैंक लिमीटेडले लगानीकर्तालाई ८.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न नवौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको सञ्चित मुनाफा समेतको रकमबाट सेयरधनीहरुलाई ६८ करोड ६६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष...
काठमाण्डौ । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ हरमटारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफनो दोस्रो वार्षिक साधारणसभा होटल गोरखा बिसौनिमा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभाले एक कित्ता बराबर एक दशमलव शून्य पाँच कित्ता (१ः१.०५) हकप्रद शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद शेयर...
अपी पावरको साधारणसभा: २००% हकप्रदलाई निश्कासनको अनुमति शीघ्र दिन आग्रह
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १५ औं वार्षिक साधारणसभा पुस २४ गते सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आ.व २०७४/०७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर(कर बाहेक) दिने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पास गरेको छ । पाँच प्रतिशत बोनस शेयर निश्कासन पश्चात चुक्तापूँजी रु.११९.०७ करोड पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण...
बीओकेको साधारणसभा माघ १७ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडले आगामी माघ १७ गते वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकको पुस २० गते बसेको संचालक समितिको १०१ औं बैठकले २४ औं वार्षिक साधारणसभा माघ १७ गते काठमाण्डौको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सन्समा आह्वानको निर्णय गरेको हो । साधारणसभा प्रयोजनका लागि बैंकले पुस ३० गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय समेत...
सानाकिसान लघुवित्तको साधारणसभा माघ १८ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आगामी माघ १८ गते आफ्नो १७ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्तावलाई पारित गर्नेछ । साधारणसभाका अन्य...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको १७.५०% लाभांश पाउने मन छ ? यसो गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले घोषणा गरेको १७.५० प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्तिको चाहना छ ? त्यसो हो भने तपाईले सकेसम्म चाँडो यो बैंकको सेयर खरीद गरिसक्नुपर्नेछ । यो बैंकले आफ्नो ३२ औं वार्षिक साधारणसभासँगै बुक क्लोजको मिति समेत सार्वजनिक गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आगामी माघ ७ गते आफ्नो वार्षिक साधारणसभा...
एभरेष्ट बैंकको २० लाभांश पाउने मन छ ? मंसिर २५ गतेभित्रै सेयर किन्नुहोस्
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमीटेडले घोषणा गरेको २० प्रतिशत नगद लाभांश आफ्नो पोल्टामा पार्ने मन छ ? छ भने तपाईले मंसिर २५ गतेभित्र यो बैंकको सेयर खरिद गरिसक्नुपर्नेछ । यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सञ्चित नाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांशको निर्णय पारित गर्न तथा अन्य अजेण्डासहित बैंकले...
सानिमा बैंकको १४% लाभांश पाउन मन छ ? उसो भए आजै किन्नुहोस् सेयर
काठमाण्डौ । सानिमा बैंकले घोषणा गरेको १४ प्रतिशत नगद लाभांश तपाई पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईले आज(बिहीबार) कारोबार अवधिभित्रै सानिमा बैंकको सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यो कम्पनीले प्रस्तावित नगद लाभांश पारित गर्ने गरी आह्वान गरेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि(मंसिर १४ गते)लाई बुक...